विक्रेता प्रमाणिकरणले नै ग्यास काराेबार व्यवस्थित हुन्छ : थापा-Setoghar
विक्रेता प्रमाणिकरणले नै ग्यास काराेबार व्यवस्थित हुन्छ : थापा
ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले सहज रुपमा ग्यास काराेबारलार्इ व्यवस्थित र अात्मनिर्भर बनाउनकाे लागि लामो समय देखि विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ भने ग्यास व्यवसायमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिने बारे विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दै आइएकाे छ । लामो समय देखि महासंघ ग्यास व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको निम्ति लागिरहेको छ । अहिले ग्यास काराेबार निकै वृहद बनिसकेकाे अवस्थामा यस व्यवसायलार्इ व्यवस्थित गर्न अाधुनिक प्रविधिमा अाधारित रही सबै व्यवसायीकाे विवरण एउटै सफ्टवेयरमा समेट्नुपर्ने अावश्यकता रहेकाे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बताएका छन् ।
यसै सम्बन्धमा हामीले महासंघका गतिविधि र ग्यास कारोबार बारे महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापासँग संक्षिप्त कुरा गरेका थियौं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी ः
ग्यासमा कमिसन वृद्धिको कुरा कहाँ पुग्यो ?
हामीले ग्यास कारोबारमा टिक्नको निम्ति न्यूनतम कमिसन दर ग्यासकाे मूल्यकाे ५ प्रतिशत हुनुपर्ने बारे कुरा उठाउँदै आएका छौं । व्यवसायमा लगानी बढेको, सञ्चालन खर्च बढेको, अन्य सबै कुराहरु बढेको अवस्थामा ग्यास व्यवसायीहरु भने पहिलेकै कमिसन दरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले सम्म कायम छ । कमिसन दर बढ्न नसक्दा कारोवारमा संलग्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरु निकै नै समस्यामा छन् । साथै व्यवसायीहरु व्यवसायमा टिक्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको हुनाले हामीले कमिसन वृद्धिको कुरा उठाएका हौं । अहिलेको अवस्थामा ग्यासमा ५ प्रतिशत कमिसन हुनसके मात्र हामी व्यवसायमा टिक्न सक्ने अवस्था छ ।
यस कुरालाई विचार गर्दै जतिसक्दो छिटो हामीहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यस बारे हामीले सरकारी पक्षलार्इ ध्यानाकर्षण गराएका छाैं । हाम्राे माग सुनुवाइ हुनेमा हामी अाशावादी छाैं ।
कमिसन वृद्धि हुन नसके के गर्नुहुन्छ ?
हामी आशावादी छौं, सरकारले हाम्रा मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नेछ । हामी विगत देखि नै आन्दोलनका विरोधी हौं । आन्दोलन समस्याको समाधान नहुने र उपभोक्तालाई समेत यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई विचार गरेर हामी वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान खोजिरहेका छौं ।
चाडपर्वमा विगत जस्ताे ग्यास अभाव त हुँदैन नि ?
यस बर्ष माग बमोजिम सरकारले आवश्यक ग्यास उपलब्ध गराएकाे छ । हामीले पनि विक्रेताहरूलार्इ व्यवस्थित रूपमा काराेबार गर्ने बारे विशेष पहल समेत गरेका छौं । यसले गर्दा उपभाेक्ताले ग्यासकाे अभाव भाेग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।
पछिल्लाे समय दुर्घटना बढिरहेको अवस्था नि, यसलार्इ कसरी लिनुहुन्छ ?
हामीले सम्भावित दुर्घटनालाई लक्षित गरेर जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर यत्तिले मात्र प्रयाप्त छैन ।
पछिल्लो समय ग्यास ग्रामीण क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन थालेको तर ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तालाई ग्यास प्रयोग बारे जानकारी हुन नसकेको कारण दुर्घटना बढेको हुनाले अब स्थानीय तहको सहकार्यमा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।
साथै सिलिण्डर कस्तो छ भन्ने कुराको समेत निरन्तर जाँचको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसो भए दुर्घटना केही हद सम्म कमी गर्न सकिन्छ ।
के कमिसन वृद्धि उद्योगी र विक्रेता दुवैको साझा एजेण्डा हो त ?
हो, लामो समय देखि उद्योगी र विक्रेताको कमिसन बढेको छैन । यसकारण अहिले हामीले उद्योगी र विक्रेता दुवैले साझा एजेण्डाको रुपमा हाम्रा मागहरु अघी बढाएका छौं ।
चर्चामा रेकाे विक्रेता प्रमाणिकरण कस्तो अवधारणा हो ?
नेपालमा एलपी ग्यास कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यले बिक्रेता प्रमाणिकरण अवधारणा ल्याइएको हो । नेपाल सरकारले विगत ३ बर्ष पहिले नै विक्रेता प्रमाणिकरण अवधारणा ल्याएको भएपनि अहिले सम्म पनि यसको राम्रो तवरले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विक्रेता प्रमाणिकरणका मापदण्डहरु के छन् ?
नेपाल सरकारले विक्रेता प्रमाणिकरणको निम्ति विभिन्न मापदण्डहरु कायम गरेको छ । प्रमाणिकरण मापदण्ड अन्तरगत उद्योगको आधिकारिक डिलर हुनुपर्ने, आधिकारिक रुपमा सम्बन्धित निकायहरुमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, ग्यासको छुट्टै पसल हुनुपर्ने, फायर फायटिङ मेसिन र तराजु लगायतका उपकरणहरु हुनुपर्ने, आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु प्रमाणिकरण अवधारणामा संलग्न गरिएको छ ।
नजिकिएका चाडपर्वहरुको अवसरमा महासंघकाे तर्फबाट हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता, उद्योगी, विक्रेता तथा शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल शुभकामना प्रकट गर्दछ । चाडपर्वमा सबैले खुसीयाली महसुस गर्न सकुन् । सबैमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुकाे कामना गर्दछु ।